၎ လ​လောက်​ထဲက လမ်း​မ​လျှောက်​နိုင်​​အောင်​ နာ​နေတဲ့ဒူးကို တပါတ်အတွင်း သက်သာစေသည့် ဆေးနည်း – သတင်းစုံ
News and Entertainments
၄ လ​လောက်​ထဲက လမ်း​မ​လျှောက်​နိုင်​​အောင်​ နာ​နေတဲ့ဒူးကို တပါတ်အတွင်း သက်သာစေသည့် ဆေးနည်း
blissful-burnell Health 0
ကိုယ်​​တွေ့မို့ မျှ​ဝေပါရ​စေ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၄ လ​လောက်​ထဲက လမ်း​တောင်​မ​လျှောက်​နိူင်​​အောင်​ နာ​နေတဲ့ ဒူး ကျီး​ပေါင်းတက်​တာအထူးကုနဲ့ပြ​/ ​ဆေးမျိုးစုံ​သောက်​/စက်​​တွေနဲ့​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​ မ​ပျောက်​လို့ စိတ်​ညစ်​​နေတာ
သူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​နဲ့​တွေ့ပြီး သူ့ကိုယ်​​တွေ့ဆိုပြီးညွန်းလို့ မယုံ​ပေမဲ့စမ်းကြည့်​လိုက်​တာ တပတ်​အတွင်းလုံးဝနီးပါး​ ပျောက်​သ​လောက်​ဖြစ်​သွားလို့ ပြန်​လည်​မျှ​ဝေပါတယ်​ မူရင်းတင်​သူက သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ဦးပါ ကိုယ်​​တွေ့မို့ စမ်းကြည့်​​စေချင်​တယ်​​
သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ဦး Post
၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရက်နေ့က မတွေ့တာနှစ်​ပေါင်း၄၀ကျော်ကြာပြီဖြစ်​တဲ့ သူငယ်ချင်းသင်္ချာပါမောက္ခ ကိုဝင်းဆွေ(အငြိမ်းစား)ပေးတဲ့ aဆးနည်း၆/၈/၁၈နေ့မှာဘဲ စလိမ်းတာကနေ့၇၅%လောက်ကောင်းနေပါပြီ
သူငယ်ချင်းကတော့လည်ပင်း ကြီးပေါင်းဇက်လိမ်နေတဲ့အဆင့်ကို ၄၅ ရက်နဲ့ပျောက်ခဲ့တယ်လို့ နုတ်ပြောလေးနဲ့မျှဝေလို့ ၃. ၄ ဦးလောက်လဲအဆင်ပြေနေကြပြီ​
​ဝေဒနာရှိနေရင် ကောင်းစေချင်လို့ ထပ်ဆင့်ဖြန့်ဝေတာပါ ဆေးနည်းကအရမ်းဈေးသက်သာပါတယ် သုံးကြည့်ပါ ရက်ရှည်အကြိမ်များများ လိမ်းဖို့တော့လိုပါတယ်
ကွမ်းစားတဲ့ထုံးနဲ့ အုန်းဆီကိုသမအောင်ရောစပ်ပြီး လိမ်းတဲ့နေရာထုံးဖွေးနေဖို့လဲ မလိုဘူးထုံးများသွားရင်​လဲ ထုံးကအဖတ်​လိုက်​ကွာထွက်​ပါတယ်​ အုန်းဆီများသွားရင်​လဲ အဝတ်​အစား​တွေဆီ​ပေပါတယ်​ ချိန်​ဆပြီး​ရောပါ အချိုးအစားအစဉ်​​ပြေသွားရင်​ ​ခြောက်​သွားပါတယ်​
ထုံးမကြီးသီး​စေ့ ၅ ​စေ့စာ​လောက်​ကို အုန်းဆီ ၆ စက်​/၇ စက်​ ​လောက်​ ထည့်​ရင်​ အ​တော်​ပါဘဲ နှစ်​ခုစပ်​ပြီးရင်​ ဖြစ်​တဲ့​နေရာကိုအတော်ကြာပွတ်ပေးဖို့​တော့လိုပါတယ်
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါ ထုံးမပေါက်ပါ ကိုယ်တွေ့ပါ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ အဆင်​​ပြေလို့ ကောင်းပါတယ်ဆိုရင်​ နောက်လူတွေထပ်​ညွန်း​ပေးပါ
အားလုံးသက်​သာ​ပျောက်​ကင်းကြပါ​စေ ကိုဝင်းဆွေ ကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
U Zaw Oo
ကိုယျတှမေို့ မြှဝပေါရစေ လှနျခဲ့တဲ့ ၄ လလောကျထဲက လမျးတောငျမလြှောကျနိူငျအောငျ နာနတေဲ့ ဒူး ကြီးပေါငျးတကျတာအထူးကုနဲ့ပွ/ ဆေးမြိုးစုံသောကျ/စကျတှနေဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ မပြောကျလို့ စိတျညဈနတော
သူငယျခငျြးတဈယောကျနဲ့တှပွေီ့း သူ့ကိုယျတှဆေို့ပွီးညှနျးလို့ မယုံပမေဲ့စမျးကွညျ့လိုကျတာ တပတျအတှငျးလုံးဝနီးပါး ပြောကျသလောကျဖွဈသှားလို့ ပွနျလညျမြှဝပေါတယျ မူရငျးတငျသူက သူငယျခငျြး ကိုဇျောဦးပါ ကိုယျတှမေို့ စမျးကွညျ့စခေငျြတယျ
သူငယျခငျြး ကိုဇျောဦး Post
၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရကျနကေ့ မတှတေ့ာနှဈပေါငျး၄၀ကြျောကွာပွီဖွဈတဲ့ သူငယျခငျြးသင်ျခြာပါမောက်ခ ကိုဝငျးဆှေ(အငွိမျးစား)ပေးတဲ့ aဆးနညျး၆/၈/၁၈နမှေ့ာဘဲ စလိမျးတာကနေ့၇၅%လောကျကောငျးနပေါပွီ
သူငယျခငျြးကတော့လညျပငျး ကွီးပေါငျးဇကျလိမျနတေဲ့အဆငျ့ကို ၄၅ ရကျနဲ့ပြောကျခဲ့တယျလို့ နုတျပွောလေးနဲ့မြှဝလေို့ ၃. ၄ ဦးလောကျလဲအဆငျပွနေကွေပွီ
ဝဒေနာရှိနရေငျ ကောငျးစခေငျြလို့ ထပျဆငျ့ဖွနျ့ဝတောပါ ဆေးနညျးကအရမျးဈေးသကျသာပါတယျ သုံးကွညျ့ပါ ရကျရှညျအကွိမျမြားမြား လိမျးဖို့တော့လိုပါတယျ
ကှမျးစားတဲ့ထုံးနဲ့ အုနျးဆီကိုသမအောငျရောစပျပွီး လိမျးတဲ့နရောထုံးဖှေးနဖေို့လဲ မလိုဘူးထုံးမြားသှားရငျလဲ ထုံးကအဖတျလိုကျကှာထှကျပါတယျ အုနျးဆီမြားသှားရငျလဲ အဝတျအစားတှဆေီပပေါတယျ ခြိနျဆပွီးရောပါ အခြိုးအစားအစဉျပွသှေားရငျ ခွောကျသှားပါတယျ
ထုံးမကွီးသီးစေ့ ၅ စစေ့ာလောကျကို အုနျးဆီ ၆ စကျ/၇ စကျ လောကျ ထညျ့ရငျ အတျောပါဘဲ နှဈခုစပျပွီးရငျ ဖွဈတဲ့နရောကိုအတျောကွာပှတျပေးဖို့တော့လိုပါတယျ
ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိပါ ထုံးမပေါကျပါ ကိုယျတှပေ့ါ စမျးကွညျ့လိုကျပါ အဆငျပွလေို့ ကောငျးပါတယျဆိုရငျ နောကျလူတှထေပျညှနျးပေးပါ
အားလုံးသကျသာပြောကျကငျးကွပါစေ ကိုဝငျးဆှေ ကိုကြေးဇူးတငျစှာဖွငျ့
မူရငျးတငျသူ.U Zaw Oo
ကမ်းမမြင်တဲ့ ပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာ ဖျာပုံကနေမျောလာလိုက်ကြတာ….(ရေလုပ်သားတို့ရဲ့…အသက်ဟူသည်)
“မျက်စိမှုန်သူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်လက်(သို့) နတ်မျက်စဉ်း”